नेकपामा ‘दोहोरो’ मापदण्ड : सोडारीलाई कारवाही, बाँस्कोटालाई ‘उन्मुक्ति’ ! | Ratopati
नेकपामा ‘दोहोरो’ मापदण्ड : सोडारीलाई कारवाही, बाँस्कोटालाई ‘उन्मुक्ति’ !
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeफागुन २०, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) मा उस्तै प्रकृतिका घटनामा कसैलाई कारबाही त कसैलाई उन्मुक्ति दिने ‘दोहोरो मापदण्ड’ लागू गर्न खोजिएको छ ।
उस्तै उस्तै प्रकृतिका घटनामा समेत कसैलाई सामान्य स्पष्टीकरण समेत नसोधी कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ भने कसैलाई कारबाहीको प्रक्रिया नै अघि नबढाएपछि सो पार्टीमा व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।
पार्टीले पछिल्लो पटक कैलालीका दीर्घ सोडारी र काभ्रेका गोकुल बाँस्कोटा प्रकरणमा देखाएको दोहोरो चरित्रबाटै आफू निकटकालाई संरक्षण र अन्यलाई प्रहार गर्न खोजेको प्रस्ट भएको नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरुको भनाई छ ।
उदाहरण १ : नेकपा कैलाली जिल्ला कमिटी अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री थिए दीर्घ सोडारी । तर उनलाई एक महिलालाई मुख छाडेको आरोपमा पार्टीले कारबाहीको डण्डा बर्सायो । पदीय आचरण र सामाजिक मर्यादाभन्दा बाहिर गएर ‘अश्लील शब्द’ प्रयोग गरेको भन्दै मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सदस्यताबाटै सोडारीलाई हटाइएको थियो । २०७५ कात्तिक २७ गते उनलाई मन्त्री पदबाट हटाउँदै ६ महिनासम्म पार्टी सदस्यसमेत नरहनेगरी निलम्बन गरिएको थियो । तर डेढ वर्ष हुनलाग्दासमेत उनको निलम्बन फुकुवा भएको छैन । जब कि सोडारीले प्रयोग गरेको अश्लील शब्द अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।
नेकपाको विधानमा कसैलाई कारबाही गर्नुपर्दा ‘स्पष्टीकरणको मौका दिइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि कसैलाई कारबाही गर्नुपरेमा मौका दिनुपनुपर्छ र त्यसमा चित्त नबुझे मात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिन्छ । तर सोडारीको हकमा यो सिद्धान्त लागू भएन । उनलाई सामान्य स्पष्टीकरणको मौका पनि दिइएन र मन्त्री पदबाट बर्खास्त मात्रै गरिएन, पार्टी सदस्यबाटै हटाइयो ।
उदाहरण २ : सङ्घीय सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन ‘डिल’ गरेको अडियो २०७६ फागुन ७ गते सार्वजनिक भयो । उक्त अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरे पनि उनलाई पार्टीले अहिलेसम्म कुनै कारबाही गर्ने हिम्मत देखाएको छैन । त्यति मात्रै होइन प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली आफै गोकुल बाँस्कोटाको हकमा गल्ती नै नगरेको भनेर बचाउमा उत्रिएका छन् । गत बिहीबार नेकपा बागमती प्रदेशको प्रशिक्षण तथा भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटामाथिको आरोप झुटो रहेको र गल्ती नै नगरेको भन्दै बचाउ गरेका थिए । यसबाट के बुझिन्छ भने नेकपामा विधि, पद्धति र प्रक्रियालाई एकातिर पन्छाएर गुटका आधारमा मात्रै कारबाही हुन्छ भन्ने स्पस्ट बुझ्न सकिन्छ ।
कसैलाई उन्मुक्ति कसैलाई बर्खास्त
पदीय आचरण, सामाजिक मर्यादा, भ्रष्टाचार, अनियमितता, गैरराजनीतिक कदम लगायतका पार्टी अनुशासन विपरीत काम गर्नेलाई पार्टीले कडा कारबाही गर्न सक्छ । त्यसका लागि केन्द्रमा अनुशासन आयोग नै गठन भएको छ । तर गोकुल बाँस्कोटा प्रकरण सोडारीको भन्दा अझ गम्भीर देखिन्छ । भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधको आरोप लागेपछि उनलाई पार्टीभित्रै पनि छानबिनको माग गर्दा अध्यक्ष केपी ओलीले ‘आवाश्यक नभएको’ भनेर पन्छाउने गरेका छन् । नेकपामा अनुशासन हेर्ने निकाय केन्द्रीय अनुशासन आयोग नेता अमृतकुमार बोहोराको नेतृत्वमा छ तर उक्त आयोग अहिलेसम्म पूर्ण नै हुन सकेको छैन । नेकपामा अनुशासनको दोहोरो रणनीति किन भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष बोहोरा यसबारे अस्पस्ट जवाफ दिन्छन् ।
उनको प्रतिक्रिया छ ‘आयोगले नै पूर्णता पाएको छैन । कारबाहीको कुरा त परै जावस् ।’
किन भएन गोकुलमाथि कारबाही ?
गोकुल बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीका अत्यन्तै विश्वासपात्र मानिन्छन् । यतिसम्म कि पहिलो पटक निर्वाचन जितेका बाँस्कोटालाई ओलीले मन्त्री मात्रै बनाएनन् सरकारको प्रवक्ता नै बनाए । सुरुमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका बाँस्कोटाले केही महिनामै बढुवा पाए र फूलमन्त्री पड्काए । त्यति मात्रै होइन ओली क्याबिनेटमा अरू मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली थिए बाँस्कोटा । तर तिनै बाँस्कोटा भ्रष्टाचारजस्तो जघन्य अपराधमा मुछिँदा उनलाई न पार्टीले कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ न त्यसबारे कुनै अध्ययन नै, जसले गर्दा नेकपाभित्र ‘कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा’ भन्दै असन्तुष्टि चुलिन पुगेको छ ।
नेकपामा कारबाहीको दोहोरो मापदण्डबारे एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘गुटका आधारमा कसैलाई कारबाही र कसैलाई पुरस्कार दिने व्यवहारले समग्र पार्टीलाई हित गर्दैन । सोडारी र बाँस्कोटा प्रकरणमा पार्टीले दोहोरो चरित्र देखिएको छ । यो राम्रो होइन । यसबाट कसैलाई काखा र कसैलाई पाखाको व्यवहार भएको छ ।’
किन भयो सोडारीलाई कारबाही ?
पूर्व एमाले कैलालीको नेतृत्वमा रहँदा नेता माधव नेपालसँग नजिक थिए सोडारी । प्रदेश सरकार गठनका बेला पनि सोडारी सामाजिक विकासमन्त्री पदमा नेता नेपालकै जोडबलमा नियुक्त भएका थिए । तर मन्त्री पदमा नियुक्त भएको केही महिनामै उनले एक महिलामाथि गालिगलोजको शब्द प्रयोग गरेका थिए । ती महिलाको उजुरीका आधारमा पार्टी केन्द्रको निर्देशनमा प्रदेश कमिटीले निर्णय गरेर सोडारीलाई सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएको थियो ।
सोडारीविरुद्धको उजुरी प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सम्मै उजुरी पुगेको थियो । त्यसबेला सोडारीलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा बालुवाटरमा दुई अध्यक्षसहित नेता नेपालसँग पनि छलफल भएको थियो । उनी ‘यौनजन्य हर्कत’मा फसेको र अडियो नै बालुवाटार आइपुगेपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले नै हटाउन ठाडो निर्देशन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सोडारीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली पहिलेदेखि नै सन्तुष्ट थिएनन् । सोडारी निकटस्थ स्रोतका अनुसार उनी माले पृष्ठभूमिका हुन् र सुरुमा वामदेव गौतम निकट मानिन्थे ।
०६५ को पार्टी महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको कित्तामा उभिए भने ०७१ को महाधिवेशनमा नेता नेपालको पक्षमा खडा भए । आफ्नो समूहमा नरहेकाले ओली रुष्ट भएपछि उनले प्रदेशसभाको टिकट पाउनसमेत निकै पापड पेल्नुपरेको नेकपाकै नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । कारबाही भएपछि सोडारीले आफूलाई सिध्याउन प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा, केन्द्रीय सदस्य नारदमुनि राना थारु लगायतका नेता लागेको र उनीहरुले अध्यक्ष ओलीलाई समेत प्रभाव पारेको गुनासो आफू निकटस्थसँग गरेका थिए ।
नेकपा विधानमा अनुशासनबारे यस्तो व्यवस्था छ :
नेकपाको विधानमा अनुशासनबारे प्रस्ट व्यवस्था छ । जसमा केन्द्रीय आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । हाल आयोगका अध्यक्ष नेता अमृतकुमार बोहोरा छन् । ३५ सदस्यीय यो आयोमा अध्यक्ष र सचिवबाहेक अरूको नियुक्ति नै हुन सकेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाउँदा काम प्रभावित बनेको अध्यक्ष बोहोराले गुनासो गर्दै आएका छन् ।
नेकपाको विधानअनुसार कुनै पनि पार्टी कमिटी वा सदस्यले केन्द्रीय कमिटीबाट आपूmमाथि भएको कारबाहीमा चित्त नबुझी दिएको पुनरावेदन ग्रहण गर्ने, आवश्यक छानविन तथा पैmसला गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय कमिटीमार्फत् वा सीधै सम्बन्धित कमिटीलाई निर्देशन दिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टी अनुशासन, निर्णय र निर्देशनको पालना गरे वा नगरेको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने तथा तोकिएबमोजिम पार्टी कमिटीका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू र पार्टीका तर्पmबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवम् लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन, अद्यावधिक र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ ।
आयोगमा विचाराधीन मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित कमिटीका बैठकमा उपस्थित हुन सक्ने र अनुशासनको कारबाही र पुनरावेदनसँग सम्बन्धित निर्णयको लिखित जानकारी सरोकारवाला व्यक्ति तथा सम्बन्धित कमिटीलाई र सबै किसिमका निर्णयहरूको जानकारी केन्द्रीय कमिटीलाई दिने व्यवस्था छ ।
#गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा#नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी#नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)#दीर्घ सोडारी
March 3, 2020, 4:13 p.m. Tapan Singh
बास्कोटा कान्ड मिडिया मा आएसी सर्व साधारण जनता ले गाली गर्नु लाइक डिस्लाइक गर्नु ठुलो कुरा हैन संसार कै जनता ले गर्छन् तर धेरै कमुनिस्ट साथी हरु ले नै मन नपराएका तर ओली र ओली प्रब्रिती लाई रिझाएर ओली का हिरो बनेका बास्कोटा अरु लाई उजन्ड, बदमाश, जिद्धी, धनी बाउको बिग्रेको छोरा जस्तो लाग्छ। बास्कोटा लाई साह्रा ले थुक्दा नि ओली चुप लाएर अथवा भोली छानबिन बाट पत्ता लाग्ने नै छ भन्नु को साटो अझै पनि निर्दोश, नक्कली भिडियो……….. जस्ता कुरा गर्ना ले ओली कती जिद्धी, मुर्ख छ भन्ने था हुन्छ। एस बाट जनता लाई च्यालेन्ज गर्ने ओली, ओली प्रबिर्ती र नेकपा धेरै छिटो पतन हुने संघार रहेको बुझिन्छ .......
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ६ हजार ३४३ जना संक्रमित
कोरोनाबीच परीक्षा : सङ्क्रमित पनि एउटै हलमा, परीक्षा केन्द्रमा तनाव !